HAYILE MAARIYAAM DESSAALENYI OROMIYAA JECHUUNN KANA!!! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsHAYILE MAARIYAAM DESSAALENYI OROMIYAA JECHUUNN KANA!!!
HAYILE MAARIYAAM DESSAALENYI OROMIYAA JECHUUNN KANA!!!
Anaan yeroo Abiy Ahmedn qeeqxanii Lammaa Magarsaa jajjan nadhibaam. Yoom siyaasa shiraa kana bartuu laata? Bar lamaanshee tokkuma. Garboota/Harroota Habashaati. Habashaatu ba’aa itti fe’atee naanneessaa oola. Ciisichi sireeshees foolii Habashootaan guutuudha. Garaa qulqulluun Oromoof quuqamuu hindandeessu. Ilmaan gudeedaa miti. Afaan damma sanaan as baatee miidiyaan nugowwoomsuu malti. Kun simirqaansisuu hinqabu. Bilisummaa feeta taanaan falmadhuuti sirna kana diigi. Mootummaa mataakee ijaarradhu. Lammaafi Abiy n akka namoota garaagaraa ta’aniitti hin afarsiin. Hundishee tokko, Sababiin garbummaa Oromoo jara kana lameenidha. Kan isaan waan waljibban fakkaatan shiraafi xaxaa siyaasaati.
HAYILE MAARIYAAM DESSAALENYI OROMIYAA JECHUUNN KANA. This is simply Carton. Cubbuun nuti kana dura HarreMaariyaamitti kolfaa turre naanna’ee Oromiyaa seene. Wayi Taayitaa Xoophiyaa kanaa
OMN: Oduu Guyyaa (Hagayya 23 2019)
The Dream of Neftegna!!!
#Kashalabbee kana dhaggeeffadhu. Bilisoomteettikaa!. Utuu dubbannuu Qeerroo kuma 7 ol mirqaansaan lubbuu galaafachiiste. Ijoolleen dhuman suniifi maatiin ijoollee Bilisummaa Oromiyaa eeganii turan. Gumaan isaanii Bilisummaadha jedhanii of jajjabeessan. Kun garuu maallaqashee guurrattee dooccooshee kana ruurreffattee callistee teesse. Yaa Oromoo, duraa ka’een sitti hime.
#Abbaan ”SHUKSHUKTAA” Kana argeetu akkana jedhe!🤣🤣🤣🤣👈
Federalist façade for centralist front https://t.co/YvjBqPe6TU pic.twitter.com/Wu3PDhl1ll
— Kichuu (@kichuu24) August 18, 2019
Yaa Obbo Shimallis Abdiisaa!-Ittaanaa Prezedaantii Oromiyaa,
1. Ayyaanni saba bulchuu sirra hinjiru. Waan Kondemii Abiy Ahmed turteef qofa aangoo qabutti gargaaramee achirra sikaawwate; xiqquma kan Oromoof quuqamu Lammaa Magarsaas achirraa darbate gurbaan #Kuulloo walakkaatti guddate sun.
2. Oromummaa hinqabdu. Jiruufi jireenyikee marti bulbula habashaati. Atumtuu Habashaa afaan bartedha.
3. Ijoollee Gandaan ijaarte. Kanaaf ati Oromiyaa bakka hinbuutu. Ati gandeedha. Sammuunkees sana dabarsee yaaduu hindanda’u. Artist Hacaaluu Hundeessaati ka’ee tuuta tuutaan of jalatti ijaarrattee dantaadhaan ijoollee bokoksitee ofitti dachaaste. Waa’ee Kondemineemii nama 7f gidduu kana hiramtee boodan itti deebi’a.
4. Gaaffii Oromoo deebisuu hindandeessu. Wallaalaan gaaffii hindeebisu. Garaa baldhatte malee sammuunkee huuqqataadha. Hoffaa jechuun suma. Hoffaan qilleensa xixiqqaan qurxama. Hoffaan akkakee maatii tokko bulchuu hindanda’u. Ati haasaas hinbeettu. Dubbiinkee camcamii hinqabu. Ayyaana hinqabdukaa!
Jarana, Oromoon yoom ooggansa haqaafi hayyuu argatti laataa?
Ethiopia: ዘ-ሐበሻ የዕለቱ ዜና | Zehabesha Daily News August 23, 2019
“Jaal Marroo kiyya hin hiikkatin qawwee” Dargaggoo Sikkoo Mandoo.